Is-rasaaseyn ka dhacday Xarunta NISA - Xaaladda Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Is-rasaaseyn ka dhacday Xarunta NISA - Xaaladda Muqdisho
Inta badan wadddoyinka degmooyinka, Wardhiigley, Boondheere, Shibis shangaali iyo Cabdicasiis, ayaa xiran, waxaana la filayaa in ciidamo uu hoggaaminayo Bashiir Goobe, ay gaaraan Habar Khadiiyo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Is-rasaaseyn xooggan ayaa dhawaan laga maqlay aagga xarunta hay’adda Nabad-sugidda iyo sirdoonka Qaranka, ee Habar Khadiijo, waxaana la soo warinayaa in ay labo garab u kala jabeen Ciidamada ha’adda ee ku sugan Taliska, kuwaas oo isku khilaafay midka la qaadanayo go’aannada ka soo kala baxay Rooble iyo Farmaajo, ee ku addan magacaabidda Agaasimaha Nadad-sugidda.
Ciidamada loo yaqaan Duufaan oo si buuxda uga amar qaata eedeysanaha xilka dhawaan laga raacdeeyay ee Fahad Yaasiin, oo uu wato Yaasiin Farey, ayaa saaka lagu daadiyay aagga Xarunta, hayeeshee is-rasaaseyn kooban kadib Ciidamada loo yaqaan Waran oo aqoonsan magacaabiddi Ra’iisul Wasaaraha ee Bashiir Goobe, ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta guriga Habar Khadiiyo.
Ciidamada uu horkacayay Yaasiin Farey, ayay wararku sheegayaan in ay dib ugu soo laabteen dhanka godka Jilico, halkaas oo ay saaka ka baxeen, waxaana warar lagu kalsoonaan karo tibaaxayaan in Ciidanka loo yaqaan Gaashaan, ay dhankooda ku biireen kuwa Waran ee la filayo in ay soo dhaweeyaan Bashiir Goobe, Agaasimaha KMG, ee NISA.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir CC Warsame, ayaa dhankiisa muujiyay in uu jiro Ciidan ka tisan Nabad-sugidda oo diiday inuu Yaasiin Farey ka arrimiyo xaafiiska ugu sarreeya Taliska, wuxuuna ugu baaqay saraakiisha laamaha amniga in aysan dhowr ruux oo lagu tuhunsan yahay kiiska Ikraan tahliil, aysan danbi faraha u gelin.
Wakiillada Beesha Caalamka ee Fadhigoodu yahay Xalane, ayaa la sheegayaa in ay dhankooda qadka taleefanka kula hadleen, Farmaajo iyo Rooble, isla-markaana ay amr ku bixiyeen in la dejiyo xaaladda cakiran ee ka taagan Xarunta NISA.
Qorshaha Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, ayaa ahaa inuu maanta tago Taliska, hayeeshee, taag-taag ciidan oo saaka barqadii billaawday ayaa sababtay in Rooble, ka baaqdo tagitaankii Xarunta Hay’adda.
Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir, Farxan Qaroolle, ayaa la sheegayaa inuu kulan la qaatay Yaasiin Farey, ka hor inta aysan Ciidamada Farmaajo taabacsan ka ruuqaansan Taliska NISA.
Xaaladda ayaa hadda deggan, waxaana yaaratay saxmaddii siyaaasadda, tan iyo markii beesha 6aad, (beesha caalamka) la hadleen xaafiisyada is-maan-dhaafay.
Bogga Wararka Keydmedia.net kala soco wixii soo kordha.